Saldhigyo ruushaka uu klahaa Dalka Siiriya Ayaa weerar lagu qaaday – STAR FM SOMALIA
Saldhigyo ruushaka uu klahaa Dalka Siiriya Ayaa weerar lagu qaaday
Wasaarada Gaashaandhiga ee Ruushka ayaa xaqiijisay in kooxaha mintidiinta Suuriya ay u isticmaaleen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn weerar ay ku qaadeen Saldhigyadooda ciidamada cirka iyo kuwa badda ee Suuriya ku yaalla.
Wasaarada ayaa sheegtay in wax khasaaro ah uusan ka dhalan weerarada lagu qaaday saldhigyadaasi.
Saldhigyada Ruushka ee la weeraray kuna yaalla Suuriya ayaa lagu kala magacaabaa Hmeimim iyo Tartus.
Saldhigga Hmeimim ayaa muhiim u ahaa dagaalka ay Ruushka gacanta ku siinayaan madaxwayne Assad.
Xukuumadda Moscow ayaa horey u sheegtay in hoobiyayaal lagu weeraray saldhigaasi bilowgii sanadkan ay ku dhinteen laba askari.
Dowladda Ruushka ayaa gacan ka siisay xukuumadda Assad sidii ay dib ugu qabsan lahayd goobaha ay mucaaradka haysteen.
Ciidamada Lugta Turkiga oo gudaha u galay Waqooyiga Syria (Daawo Sawiro)
Boqortooyada Sacudi Carabiya Ayaa Xabsiga Dhigtey 11 Amiir
Booliska Australia Oo Baadi Goobaya Muwaadin Soomaaliyed Oo Dil Ka Geystay Dalkaasi.
Booliska dalkaasi ayaa soo saaray Warqaddii lagu soo qaban lahaa Ninkaasi oo lagu magacaabo C/qaadir Faarax, kaasi oo lagu eedeynayo inuu Marxuum la oran jirey C/llaahi Maxamed Cigaal ku dilay dalkaasi sannadkii 2015-kii.
Hadal-qoraal oo ay Boliska Australia soo saareen ayey ku sheegeen inuusan jirin Heshiis ay Dowladaha Somalia iyo Australia horey isugu raaceen in Dembiilayaasha la isku soo celin karo.
Eedeysanaha la raadinayo ayaa la sheegay inuu dalka Australia ka soo baxsaday markii uu dilkaasi geystay, isla markaana uu haatan ku sugan gudaha Somalia, inkastoo aysan Boliska si rasmi ah u caddeynin magaalladda uu kaga sugan dalka Somalia.
Boliska Australia waxay sheegeen inuu C/qaadir Faarax ka soo dhoofay Garoonka Caalamiga ee magaalladda PERTH, isagoo Transit ku soo maray Dubai, ka hor inta uusan ku soo laabanin Somalia.
Dhinaca kale, Maydka Marxuumka la dilay ee C/llaahi Maxamed Cigaal oo 25-jir ahaa waxaa maydkiisa la helay bishii October ee sannadkii 2015-kii, 5 bilood kadib, markii la waayey Eedeysanaha dilka geystay.
Masjidka Xaramka Ayaa Waxa Ku Soo Jabay Washiir Shaqo Kawaday Masjidka
Saraakiisha Mamulka magaalladda Maka Al-mukarama ee dalka Sacuudiga ayaa sheegay inuu Wiish nooca guur-guura soo jabay kuna habsaday goob uu dhismo ka socday Masjidka weyn ee Maka, iyadoo Dareewalkii Wiishkaasi uu soo gaaray dhaawac fudud.
Twitter-ka Telefishinka Al-Ekhbaariya waxa uu ka soo xigtay Sarkaal ku sugan Maka Al-mukarama inaysan waxyeello soo gaarin dadkii ku cibaadaysanayey Masjidka Xaramka.
Goobta uu dhismuhu ka socdo ee Masjidka Xaramka ayaan weli loo furin dadka Cibaadaysana, kuwa Cumradda iyo dadka kale ee u soo cibaada taga Masjidka weyn ee Xaramka ee magaalladda Maka Al-mukarama.
Sawiro laga soo qaaday goobta uu ka dhacay Shulka, ayaa muujinaya inuu Wiishku ku dhacay meel uu dhismo ka socday, oo uusan ku dhicin meel ay dadkii cibaadaysanayey joogeen
Trump ayaa ku dhowaaqay in dowladiisu ay ka baxday heshiis lala galay sanadkii 2015 wadanka Iran
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhowaaqay in dowladiisu ay ka baxday heshiis lala galay sanadkii 2015 wadanka Iran kaasoo ku saabsanaa horumarinta barnaamijka Niyukliyerka.
Trump ayaa saxiixay ka bixitaan heshiiskan waxana uu sheegay in cunoqabatayn xoog leh uu ku soo rogayo dalka Iran.
Shir jaraa’id oo goor dhow qabtay ayuu Madaxweynaha Maraykanka waxa uu ku eedeeyay dowlada Iran inay gacan siiso kooxaha argagaxisada ah isagoo tusaale u soo qaatay kooxaha Xamaas,Daalibaan iyo Alqaacida.
Dowlada Maraykanka ayaa hore loogu baaqay inaysan ka bixin heshiiskan lala galay dalka Iran,hase yeeshee baaqyadaas ayaa guuldareystey kadib markii uu Madaxweyne Trump ku dhowaaqay in dowladiisu ay ka baxday heshiiska.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in haddii heshiiskan uu sii socdo wadan walba oo ku yaal bariga dhexe waxa uu tartan u galayaa in uu sameysto hub niyukliyer ah.
Madaxweynaha Iran Ruuxaani ayaa si dhaqso ah uga jawaabay warka ka soo baxay Madaxweynaha Maraykanka waxana uu ku tilmaamay ka bixitaanka heshiiska mid aan sharci ku fadhin oo xaaraan ah isla markaana carqaladaynaya heshiisyada caalamiga ah.
Madaxweyne Ruuxaani ayaa sheegay in dalkiisu uu ilaaliyo heshiisyada uu galo balse Maraykanka uu ka baxo heshiisyada uu galo.
Qorshahan dhamaystiran ee heshiiska ayaa waxaa isku raacay oo saxiixay dowladda Iiraan iyo 5 dal ee xubnaha joogatada ka ah golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Wadamadan ayaa kala ah Mareykanka , UK, Faransiiska, Shiinaha,Jarmalka iyo Ruushka. Heshiiskani barnaamijka Niyukleerka ee iiraan iyo wadamada quwadaha waawayn loo yaqaanaa (P5+1).
Heshiiskaasi waxaa qeyb ka ahaa in Iiran ay aqbashay inay yareyso keydkeeda macdanta bacriminta Yureeniyaamta oo loo isticmaali kara in hub niykliyeer ah laga sameeyo. Xadiditaankaasi ayaa lagu heshiiyay inuu socdo muddo 15 sano ah.
Heshiiska ayaa waxaa lagu taageeray qaraarkii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee tirsigiisu ahaa 2231, waxaana dhaqangalinta heshiiskani uu bilaabamay bishii January 2016, ka dib markii ay hay’ada caalamiga ah ee ka hortaga hubka Atoomikada ay xaqiijiso in Iiraan ay fulisay balanqaadka.
Wararka7 hours ago